Tokony hanome marika ny haino aman-jery zaraina ve ianao? | Martech Zone
Tokony hanome marika ny haino aman-jery zaraina ve ianao?
Talata, Jolay 22, 2014 Talata, Jolay 22, 2014 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ny orinasam-teknolojia marketing be izahay mba hampivelarana atiny sy fikarohana lalina ho an'ny infografika, whitepapers, horonan-tsary ary ny paikadim-barotra momba ny votoatiny manontolo. Amin'ny ankabeazany, manandrana mampiasa ny tanjaky ny marika foana izahay. Zava-dehibe ny fananana ny feo sy ny sary mifandraika amin'ny orinasa na ny vokatra na serivisiny amin'ny fitaovana zarain'izy ireo.
Ataovy tsotra izao, ny marikao no eritreretin'ny fanantenanao rehefa maheno ny anaranao izy. Izay rehetra heverin'ny besinimaro ho fantany momba ny fanolorana ny marikao — na ny zava-misy (ohatra, amin'ny boaty robina-atody-manga), ary ny fihetsem-po (oh: tantaram-pitiavana izany). Misy ny tanjon'ny marikao; hitan'ny olona izany. Raikitra. Saingy ao an-tsain'ny olona ihany no misy ny marikao. Jerry McLaughlin, Inona no atao hoe marika, Na izany na tsy izany?
Amin'ny fotoana hafa, tsy miala amin'ny marika amin'ny haino aman-jery nozarainy izahay. Matetika dia rehefa mamorona infografika isika. Ny haino aman-jery nozaraina toy ny whitepapers sy infografika dia manana fotoana lehibe kokoa zaraina amin'ny tranonkala. Rehefa miseho ho dokambarotra lehibe iray anefa izy ireo, dia manimba ny vintana ny fizarana izany atiny izany. Mila mamaritra ianao hoe hatraiza ny marika marika ny atiny nozaraina ary raha hanimba ny fahafahany zaraina izany.
Ohatra, niasa tamin'ny a andian-tsary momba ny lisitr'i Angie. Ny Lisitr'i Angie dia manana marika matoky sy matanjaka mahatalanjona eo amin'ny sy ivelan'ny tranonkala ka ny fampiasana ny marika dia tsy misy dikany. Ny olona dia hirona hizara ny atiny fotsiny satria azo itokisana sy azo fantarina. Zahao a Torolàlana ho an'ny fikarakarana nify ary Vanim-potoana iray amin'ny tari-dalan'ny fizaran-tany sy ny fikolokoloana bozaka. Nampiasainay ny marika ny Angie's List, ny fanaingoana ary ny fango manerana ny sary tsirairay:
Tamin'ny fotoana hafa, niara-niasa tamin'ny orinasa tsy fantatra izahay ary tsy nanana marika matanjaka, noho izany dia nifantoka tamin'ny tantara tao ambadik'ilay sombin-javatra izahay fa tsy ny marika an'ny orinasa mba hamorona sary matanjaka be izay nahomby, nozaraina betsaka ary nitarika ny mpampiasa ho amin'ny pejy fiantsonana izay ahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny lohahevitra fa tsy ny orinasa. Nampiasa lohahevitra Halloween mihitsy aza izahay satria ny sary dia namboarina nanodidina ny Halloween!
Ny nifantohanay tamin'ireto farany dia ny fizarana ny lohahevitra tsy misy marika be loatra izay mety hahatonga ny mpitory an-tserasera hisalasala amin'ny fizarana ilay sary. Ary nandaitra!
Na izany aza, tamin'ny fotoana hafa, nanosika andiana infografika marobe nomena marika isaky ny tranokalan'ny mpanjifa izahay fa tsy manao dokambarotra miharihary ilay marika. Tianay ny andian-tsary hametraka fahefana amin'ny asan'izy ireo mangina mba hizaran'ireo mpanonta ny haino aman-jery ary tsy ekeny fa marika mafy izy ireo… toa mitovy daholo ny endrik'izy ireo. Isaky ny infographic tsirairay dia nitatra ny fizarana. Mampalahelo fa ny mpanjifa (diso) namerimberina taorian'ny nandaozanay anay ary very ny momentum rehetra namboarina ka tsy hampideradera azy ireo aho.
Amin'ity paikady maharitra ity, ny tanjonay dia ny mba hahitana ity orinasa ity ho loharanon'ny fahaizana ao anatin'ny indostrian'izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa - nampiasa ny infografika izahay manangana ny marika, tsy mifantoka amin'izany.
Ny fomba fanamarihanao ny haino aman-jery aparitakao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahafahany zaraina. Ny marika matanjaka dia afaka mamono ireo mpanonta amin'ny Internet - na inona na inona tanjaky ny horonan-tsary, infographic na whitepaper. Isika isan'andro dia miorina amin'ny infografika amin'ny sehatry ny varotra - ary matetika no lavinay ireo ohatra izay dokambarotra goavambe. Tsy te hanao doka ny mpanonta ho anao, Tian'izy ireo hampiasa ny haino aman-jery tsara novolavolao hananganana lanja amin'ny mpihaino azy ireo. Miezaha handanjalanja amin'ny halalin'ny marika ampiasainao rehefa mampivelatra ny atiny ianao.
Tags: marikainfografika misy marikahaino aman-jery nozarainaMarketing InfographicsLahatsary Marketingtsy marikainfografika tsy misy marikahaino aman-jery nizarataratasy fotsy
Inona ny rafitra Net Promoter Score (NPS)?
Recruit'em: Mitadiava fifandraisana amin'ny orinasa ao amin'ny Google